Takelaka Asus ZenPad Z8 miaraka amina chip Snapdragon 650 tafaporitsaka | Androidsis
Raha mbola mitsako ny fampisehoana ny terminal Asus telo amin'ity andiany Zenfone 3 ity ary inona no ho Robot mpanampy manokana Zenbo, izao dia mahazo vaovao hafa momba isika vokatra iray hafa avy amin'ity orinasa ity. Ny tena mahaliana amin'ity vaovao ity, ankoatry ny fahafantarana ny antsipirian'ny terminal Android iray hafa, dia efa manomana ny famoahana ireo mpamokatra mandritra ny andro fantatr'izy ireo fa ho eo am-bavan'ny tsirairay izy ireo tahaka ny androany.
Asus ZenPad Z8 no takelaka navoaka tamin'ny loharanom-baovao fantatsika avy amin'i Evan Blass sy tao amin'ny Twitter toy ny @evleaks. Ha nizara sary avy amin'ilay takelaka ary ny masontsivana manan-danja indrindra amin'ity fitaovana ity avy amin'ny mpanamboatra izay nanana andro tsara tamin'ny vaovao. Nanjary ampahany lehibe amin'ity indostria ity ireo mpampahalala vaovao ireo sy ireo orinasa te-hampiakatra ny fiheverana na ny zavatra antenaina momba ny vokatra vokariny.
Raha ny filazan'i @evleaks tenany ihany dia hanana ny ZenPad Z8 Efijery 8-inch misy vahaolana 1356 x 2048 pixel. Ny takelaka dia hanana ny chip Snapdragon 650 ho ampahany lehibe amin'ny hafainganam-pandeha sy ny kajikajy rehetra ary amin'ny kinova rindrambaiko dia hanana Android Marshmallow 6.0.1.
Antenaina hiaraka amin'ny RAM 2 GB sy 16 fahatsiarovana anatiny izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny fampiasana karatra micro SD. Amin'ny ampahany amin'ny sary dia azo atao ny manana fakan-tsary 8 MP aoriana ary fakan-tsary 1.2 MP eo aloha. Hanolotra fanampiana ho an'ny LTE koa izy io. I Blass tenany ihany no nanambara fa tsy ho ela dia ho eny an-tsena ity takelaka ity, eo amin'ny tsenan'i Etazonia hatrany Verizon.
No hay tsy misy vaovao momba ny fanambarana ofisialy azy na ny vidin'ity takelaka Zen Pad Z8 ity, noho izany dia mila miandry kely isika hahitana ny tanjon'ny orinasa, na dia noho ny tsipiriany manokana aza dia tsy ho lavitra ny faritra midadasika izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Asus Zenpad Z8 misy efijery 8-inch ary fivoahana Snapdragon 650
Ny famoahana iray dia mitazona ny smartwatch an'ny HTC mandra-pahalavoany